भगवानले नास्तिकहरूलाई पनि प्रेम गर्नुहुन्छ, विश्वव्यापी चर्च अफ गड स्विजरल्याण्ड (WKG)
जहिले पनि विश्वासको प्रश्नको बारेमा छलफल हुन्छ, म छक्क पर्दछु किन यस्तो देखिन्छ कि विश्वासीहरू एक नराम्रो महसुस गर्छन्। विश्वासीहरूले उनीहरूको खण्डन गर्न सफल नभएसम्म नास्तिकहरूले कुनै न कुनै प्रमाण प्राप्त गरेको विश्वास गर्दछन्। अर्को तथ्यमा भन्ने हो भने, नास्तिकहरूले परमेश्वर हुनुहुन्न भनेर प्रमाणित गर्न असम्भव छ। केवल विश्वासीहरूले परमेश्वरको अस्तित्वको नास्तिकहरूलाई विश्वस्त पार्न सक्दैन भन्दैमा यसको मतलब यो होइन कि नास्तिकहरूले प्रमाणहरू पाइसकेका छन्। नास्तिक ब्रुस एन्डरसनले आफ्नो "कन्फिसन अफ ए एथेष्ट" लेखमा जोड दिए: "यो कुरा सम्झनु बेस हुन्छ कि होशियार भएका धेरैजसो मानिस अहिलेसम्म परमेश्वरमा विश्वास गर्छन्।" धेरै नास्तिकहरू केवल परमेश्वरको अस्तित्वमा विश्वास गर्न चाहँदैनन्। तिनीहरू विज्ञानलाई सत्यको एकमात्र मार्गको रूपमा हेर्न रुचाउँछन्। तर के विज्ञान साँच्चिकै सत्यको एक मात्र बाटो हो?
उनको पुस्तकमा: "शैतानको भ्रम: नास्तिकता र यसको वैज्ञानिक रोकथाम" अज्ञेयवादी, डेभिड बर्लिन्स्की जोड दिन्छन् कि मानव सोचको बारेमा प्रचलित सिद्धान्तहरू: ठूलो धमाका, जीवनको उत्पत्ति र पदार्थको उत्पत्ति सबै बहसको लागि खुला छन्। उदाहरण को लागी, उनी लेख्छन्:
Thought मानव विचार विकासको परिणाम हो भन्ने दाबी कुनै अकाट्य तथ्य होइन। तपाईंले भर्खर समाप्त गर्नुभयो। »
बौद्धिक डिजाइन र डार्विनवाद दुबै आलोचकको रूपमा, बर्लिनस्कीले औंल्याए कि अझै धेरै घटनाहरू छन् जुन विज्ञानले व्याख्या गर्न सक्दैन। प्रकृति बुझ्न मा ठूलो प्रगति छ। तर त्यहाँ केहि छैन - यदि यो स्पष्टसँग बुझियो र इमान्दारीपूर्वक भनियो भने - यसले सिर्जनाकर्तालाई बेवास्ता गर्न आवश्यक बनाउँदछ।
म व्यक्तिगत रुपमा धेरै वैज्ञानिकहरु लाई चिन्छु। ती मध्ये केही आफ्नो क्षेत्रका नेताहरू हुन्। तिनीहरूसँग परमेश्वरमा विश्वासको साथ चलिरहेको आविष्कारहरूमा मिलाप गर्न कुनै समस्या छैन। तपाईं शारीरिक निर्माणको बारेमा जति धेरै फेला पार्नुहुन्छ, यसले सृष्टिकर्तामा तपाईंको विश्वासलाई बढावा दिन्छ। उनीहरूले यो पनि औंल्याए कि कुनै पनि प्रयोगको योजना बनाउन सकिदैन जसले सम्पूर्ण मलाकीको लागि ईश्वरको अस्तित्व प्रमाणित गर्न वा खण्डन गर्न सक्दछ। तपाईं देख्नुहुन्छ, भगवान सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, र सृष्टिको अंश हुनुहुन्न। सृष्टिका सँधै गहिरो तहहरूद्वारा उहाँलाई खोजेर कसैले पनि "पत्ता लगाउन" सक्दैन। परमेश्वर आफैले आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्ट मार्फत आफूलाई मानिसहरूमा प्रकट गर्नुहुन्छ।
तपाईले ईश्वरलाई कहिल्यै सफल प्रयोगको परिणामको रूपमा फेला पार्नुहुने छैन। तपाईं केवल भगवान चिन्न सक्नुहुन्छ किनकि उहाँ तपाईंलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, किनकि उहाँ तपाईंलाई चिन्नुहुन्छ। त्यसकारण उसले आफ्नो छोरालाई हामी मध्ये एक हुन पठायो। जब तपाईं भगवान्‌को ज्ञानमा आउनुहुन्छ, अर्थात्, जब उसले तपाईंको हृदय र दिमाग यसमा खोलेको छ, र तपाईंले आफ्नो व्यक्तिगत प्रेमको अनुभव गर्नुभयो भने, तपाईं अवस्थित हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन।
यही कारण हो कि म नास्तिकलाई भन्न सक्छु कि यो उहाँसँगै प्रमाणित गर्न सकिन्छ कि उहाँ हुनुहुन्छ भनेर मसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँ हुनुहुन्न। एकचोटि तपाईंले उसलाई चिन्नुभयो भने, तपाईं विश्वास गर्नुहुनेछ। नास्तिकहरूको लागि सही परिभाषा के हो? मानिस जो (अझै) परमेश्वरमा विश्वास नगर्नुहोस्।